» भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण परम्पराको निरंतरता हो यसलाइ हामीले स्वीकार्नु पर्छ! प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, यस्मा तपाईं के भन्नू हुन्छ? भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण परम्पराको निरंतरता हो यसलाइ हामीले स्वीकार्नु पर्छ! प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, यस्मा तपाईं के भन्नू हुन्छ? – हाम्रो खबर
भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण परम्पराको निरंतरता हो यसलाइ हामीले स्वीकार्नु पर्छ! प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, यस्मा तपाईं के भन्नू हुन्छ?